Baydhabo kama fidsana gogol nin gob ah wax ka doonto - JAWAARI | KEYDMEDIA ENGLISH
Baydhabo kama fidsana gogol nin gob ah wax ka doonto - JAWAARI
Guddoomiyihii hore ee Golaha Shacabka, Jawaari, ayaa sheegay inuu boobka doorashadu sababi karo burburka nimaadka jilicsan ee muddada lasoo luudinayay.
BAYDHABO, Soomaaliya – Sida ay hore u baahisay Keydmedia Online, Guddoomiyihii hore ee Golaha Shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan [Jawaari], ayaa maanta dib ugu laabtay Muqdisho, kadib markii laga hor istaagay u tartanka, kursiga beeshiisa ee HOP103.
Guddoomiye Jawaari, oo shir jaraa’id, ku qabtay garoonka diyaaradaha Baydhabo, xilli uu ku soo wajahnaa Muqdisho, ayaa sheegay in laga hor istaagay xuquuddii dastuurku siinayay isla-markaana loo diiday ka qeyb qaadashada baratanka kursiga HOP103.
“Baydhabo kama fidsana gogol uu nin gob ah iyo aday wax ka soo dontaan, waxaa socda tagrifal caadi ah oo daah furnaan ka maran, waxaana lagu xad gudbayaa xuquuqda muwaadinka oo ah inuu wax doorto iyo in la doorto”. Ayuu yiri Jawaari.
Jawaari, wuxuu xusay in haddii xaaladda doorashada ay boobka kuraasta ku sii socoto, ay meesha ka bixi karto, dowladnimadii yareed ee muddada la soo yabyabayay, qaadicid natiijo iyo gacan ka hadalna uu dhici karo.
Farmaajo, ayaa kaalin xooggan ka qaatay in Jawaari laga hor istaago tartanka kursiga, isagoo ka cabsi qaba inuu ku guuleysto Guddoomiyaha Golaha shacabka ee baarlamaanka 11-aad ee JFS, wuxuuna sidoo kale, is hor istaag ku sameyn doonaa inuu soo baxo Shariif Xasan.
Prof. Jawaari, wuxuu ka mid yahay, shaqsiyaadka fara ku tiriska ah, ee muddada dheer ka tirsanaa hay’adaha dowladda, wuxuu xilal kala duwan ka soo qabtay dawladdii militariga isaga oo Agaasime guud, xoghaye joogto ah iyo wasiirba ka soo noqday wasaarado dhowr ah.
Cabashooyin xooggan ayaa hareeyay billaabashada doorashada Golaha shacabka, waxaana qeylo-dhaan xooggan diraya, Musharixiinta qaar ka mid ah kuraasta, odayaasha dhaqanka, iyo Mucaaradka.
Magaalada Baydhabo, waxaa la rumeysan yahay in ugu yaraan saddex meelood meel, xildhibaannada ka soo bixi doona ay noqdaan kuwo Fahad iyo Farmaajo qoreen, isla-markaasna la hor istaagi doono musharixiinta rasmiga ah.
Qoorqoor iyo Lafta-gareen, ayaa sidii la filayay kuraasta Golaha Shacabka u xiray shaqsiyaad gaar ah, waxaana kaliya la filayaa in ay soo saaraan taageerayaasha Farmaajo iyo saaxiibbadooda gaarka ah.
News 15 May 2022 12:15
News 15 May 2022 12:03